Voalohany, ny dikan-android. Amin'izao aloha dia tsy maintsy milamina ianao Android Froyo 2.2.2. Toa ahy io fa iray amin'ireo teboka ratsy indrindra amin'ny terminal. Miaraka amin'ny herin'ny fitaovana rehetra ananany dia tokony havaozina hatrany amin'ny boaty mankany amin'ny Gingerbread izy io. Ny terminal izay an-tànako dia tsy mamela ahy hanavao. Milaza izany fa misy lesoka mpizara ary tsy manamarina akory izany raha misy fanavaozana. Ho an'i LG dia manantena aho fa ho terminal fotsiny izany.